I-Landing Page Software evela kuFormstack
NgoLwesibili, ngo-Mashi 29, i-2011 NgoMsombuluko, Januwari 1, 2018 Douglas Karr
Bravo kubangani bami abahle ku I-Formstack - ngombono wami - uNdunankulu umakhi wefomu online kubathengisi (yebo, leso isixhumanisi sokusebenzisana). Omunye wemisebenzi enzima esinayo namakhasimende ethu lapho sakha isu lekhasi lokufika empeleni ingqalasizinda yokwakha lawo makhasi okufika ngaphakathi.
Akuseyona inkinga! I-Formstack isanda kukhipha isisombululo sayo seLanding Page ukwakha amakhasi azungeze i- I-Formstack amafomu.
Uma usebenzisa amasu wokumaketha angenayo, kubonakala sengathi alikho ithuluzi elingcono kune- I-Formstack ukwakha nokuhlela amakhasi akho okufika. Ungakhipha owodwa wawo wonke umkhankaso owodwa ngomzamo omncane kakhulu!
Tags: amafomui-formstackamakhasi okufika
Ngabe Osomabhizinisi Bazalwa?
Mar 29, 2011 ku-10: 23 PM
Ingabe amakhasi amasha okufika angasebenzela i-PPC? Yini imikhawulo nge-URL?
Mar 31, 2011 ku-8: 16 PM
UChris kulokho engikubonile kuzofanele usebenzise i-url efihliwe ukuze wenze ikhasi libonakale ngendlela ongathanda ngayo. Ngiyaqiniseka ukuthi lokhu kuzoguquka ngokuhamba kwesikhathi